A Time to Kill (1996) | MM Movie Store
အသကျ(၁၀)နှဈအရှယျ လူမဲကောငျမလေးတဈယောကျဟာ ဈေးဝယျပွီးပွနျလာတယျ….ဒီကလေးမလေးအိမျကိုပွနျရောကျမသှားရှာဘူး….လူရမျးကား (၂)ယောကျဟာခေါငျးကိုဘီယာဗူးနဲ့ပဈပေါကျပွီးကားပျေါတငျချေါကာ မုဒိမျးကငျြ့တယျ…နညျးလမျးမြိုးစုံနဲ့ရကျစကျစှာနှိပျစကျခဲ့တယျ…..
အသကျပွငျးတယျလို့ဆိုရမလားမသိ ဒီကောငျမလေး အသကျရှငျနခေဲ့တယျ…မိဘတှအေတှကျ ဖွမေဆညျနိုငျအောငျခံစားကွကှေဲနတေယျ…ဒီလိုနဲ့ဖခငျဖွဈသူဟာ ရှနေ့တေဈယောကျဆီသှားခဲ့တယျ…” ရှနေ့ကွေီး ကြှနျတျောကဉျြးထဲကွတျထဲရောကျနတေယျဗြာ….
မနှဈကလညျး လူမဲကောငျမလေးတဈယောကျကို လူဖွူ(၄)ယောကျကမုဒိမျးကငျြ့တယျ..သူတို့ထောငျမကတြဲ့အပွငျ လမျးပျေါမှာအေးအေးလူလူလမျးလြှောကျနခေဲ့တယျမဟုတျလား ရှနေ့ကွေီး”” ကြှနျတျော ဘယျလိုကူညီရမလဲဗြ”ဆိုတဲ့ရှနေ့ကွေီးရဲ့အမေးစကားကို ဖခငျဖွဈသူကကွှကှေဲစှာပွနျဖွရှောတယျ…”
ရှနေ့ကွေီးမှာလညျး သမီးတဈယောကျရှိတာပဲဗြာ…ခငျဗြားဆိုရငျရော ဘာလုပျမလဲ”တဲ့………တကယျ့ကိုကောငျးမှနျတဲ့ကားမို့ ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတာကိုခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….သရုပျဆောငျတှကေလညျး တကယျ့နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှဖွေဈသလိုIMDbလညျး 7.4 တောငျရရှိထားလို့ ထှထှေထေူးထူးတော့ညှနျးဆိုမနတေော့ပါဘူး…
သကျငယျမုဒိမျးမှုဆိုတာ တကယျ့ကိုစကျဆုတျစရာပါပဲ….နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ရကျစကျစှာ နှိပျစကျသတျဖွတျဖို့ဝနျမလေးတဲ့သူတှေ…လူ့အသိုငျးအဝနျးမှာ တကယျ့ကိုမရှိသငျ့တဲ့ အရိုငျးဆနျတဲ့လူသားတှေ…ဒီလိုအဖွဈအပကျြမြိုး ကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာလညျး မကွာခဏ ကွားနရေတယျ….
ဖမျးဆီးဖို့ရာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့လှတျနပွေီးကြှနျတျောတို့အားလုံးရော မိဘတှရေော စိုးတထငျ့ထငျ့နရေတဲ့အခြိနျဘယျလောကျတောငျမြားနပွေီလဲ..
အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် လူမဲကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတယ်….ဒီကလေးမလေးအိမ်ကိုပြန်ရောက်မသွားရှာဘူး….လူရမ်းကား (၂)ယောက်ဟာခေါင်းကိုဘီယာဗူးနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးကားပေါ်တင်ခေါ်ကာ မုဒိမ်းကျင့်တယ်…နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ရက်စက်စွာနှိပ်စက်ခဲ့တယ်…..
အသက်ပြင်းတယ်လို့ဆိုရမလားမသိ ဒီကောင်မလေး အသက်ရှင်နေခဲ့တယ်…မိဘတွေအတွက် ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ခံစားကြေကွဲနေတယ်…ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဆီသွားခဲ့တယ်…” ရှေ့နေကြီး ကျွန်တော်ကျဉ်းထဲကြတ်ထဲရောက်နေတယ်ဗျာ….
မနှစ်ကလည်း လူမဲကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လူဖြူ(၄)ယောက်ကမုဒိမ်းကျင့်တယ်..သူတို့ထောင်မကျတဲ့အပြင် လမ်းပေါ်မှာအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်မဟုတ်လား ရှေ့နေကြီး”” ကျွန်တော် ဘယ်လိုကူညီရမလဲဗျ”ဆိုတဲ့ရှေ့နေကြီးရဲ့အမေးစကားကို ဖခင်ဖြစ်သူကကြွေကွဲစွာပြန်ဖြေရှာတယ်…”
ရှေ့နေကြီးမှာလည်း သမီးတစ်ယောက်ရှိတာပဲဗျာ…ခင်ဗျားဆိုရင်ရော ဘာလုပ်မလဲ”တဲ့………တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကားမို့ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်သလိုIMDbလည်း 7.4 တောင်ရရှိထားလို့ ထွေထွေထူးထူးတော့ညွှန်းဆိုမနေတော့ပါဘူး…
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဆိုတာ တကယ့်ကိုစက်ဆုတ်စရာပါပဲ….နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့သူတွေ…လူ့အသိုင်းအဝန်းမှာ တကယ့်ကိုမရှိသင့်တဲ့ အရိုင်းဆန်တဲ့လူသားတွေ…ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း မကြာခဏ ကြားနေရတယ်….
ဖမ်းဆီးဖို့ရာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လွတ်နေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးရော မိဘတွေရော စိုးတထင့်ထင့်နေရတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်တောင်များနေပြီလဲ..